ရှမ်း ရှင်ပြု - Yangon Media Group
ရှမ်းလူမျိုးမှာ အကြမ်းအားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင် ‘ရှမ်းကြီး’ နဲ့ ‘ရှမ်းဗမာ’ပါ။ ရှမ်းကြီးက ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်မှာနေကြတဲ့ လူတွေဖြစ်တဲ့အပြင် အနက်ရောင်ဝတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းဗမာဆိုတာကို ‘မြေပြန့်ရှမ်း’ လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။ ခြေခြေမြစ်မြစ် စာပေအရ နာမည်ကတော့ ‘တိုင်းလျန်’ပါ။ တိုင်းလျန်(တိုင်းလိုင်)ဆိုတဲ့ ရှမ်းဗမာ တွေရဲ့ နယ်မြေကတော့ မြောက်ဘက် မြစ်ကြီး နားခရိုင်ကစလို့ တောင်ဘက်ကို ကသာခရိုင် အင်းတော်မြို့နယ်အထိဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းလိုင် တွေကို (ရှမ်းနီ)လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုနာမည်ရခဲ့ပုံက ပါတော်မူခါစ ရှမ်းဗမာ တွေ အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်တဲ့အခါ သူ့လူ ကိုယ့် လူ ခွဲနိုင်အောင်(ယူနီဖောင်းမရှိလို့) ခေါင်းမှာ ဖျင်စအနီကို ပတ်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် ရှမ်း ဖျင်နီတွေလို့ ခေါ်ရာက ရှမ်းနီဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်မအမေက ရှမ်းနီပါ။ ရွှေကူဆိုတော့ ဗန်းမော်ခရိုင်ကိုး။ အမေ့အဖေက မိုးညှင်း ခရိုင်၊ နမ္မားဇာတိဖြစ်လို့ ရှမ်းနီစစ်စစ်ဖြစ်ပါ တယ်။ အမေ့ရဲ့အမေ၊ ကျွန်မရဲ့အဘွားဆိုရင် ရှမ်းစကားပဲပြောတယ်။ လွှာချင်းဗလာထမီ ဝတ်တယ်။ ရှမ်းနီတွေက ဗမာဝတ်စုံပဲ ဝတ် ကြတာပါ။ ကျွန်မအဖေက တောင်တွင်းကြီးသား သူကောင်းမျိုး(မြို့သူကြီးမျိုးရိုး)ပါ။ ဒါပေမဲ့ အမေ့ရွာ ရွှေကူမှာပဲ အခြေချခဲ့ကြတာမို့ ရှမ်း နီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပဲ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရှမ်းနီ တွေရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ အဖြာဖြာကို အမေက ရာနှုန်းပြည့် ကျင့်သုံး ခဲ့တာမို့ ကျွန်မတို့လည်း ‘ရှမ်းထုံးစံ’နဲ့ ကြီး ပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ ‘ရှမ်းရှင်ပြု လွယ်တယ်မှတ်လား’ဆိုတဲ့ စကားရှိခဲ့တာဟာ ရှမ်းတွေရဲ့ ဘာသာဓလေ့ ထုံးတမ်းခိုင်ခံ့ခြင်းကို နမူနာပြပါတယ်။ ကျွန်မ သားလေးအထိ ရှမ်းထုံးစံနဲ့ ရှင်ပြုခဲ့ရတာကို သတိတရ ရေးချင်မိပါရဲ့။
ကျွန်မတို့ မြို့တွေ၊ ရွာတွေက လယ်ယာ အခြေပြုလုပ်ငန်းမို့ စပါးပေါ်ပြီး တလင်းထဲ ကနေ ကျီထဲပုတ်ထဲသိမ်းပြီးတဲ့အချိန် တပေါင်း လဆန်းမှာ သားရှင်ပြုအလှူတွေ လုပ်လေ့ရှိ တယ်။ ကလေးတွေလည်း စာမေးပွဲကြီးပြီးလို့ ကျောင်းရက်ရှည်ပိတ်တော့ အချိန်ရတယ် ပေါ့လေ။ အဲဒီလို တပေါင်းမှာ ရှင်ပြုဖို့ ရည် ရွယ်ထားပြီဆိုရင် တပို့တွဲလလောက်ကစပြီး ပြင်ဆင်လေ့ရှိတယ်။ အလှူလုပ်မယ့်လူက ရပ်ရွာလူကြီးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ပြီး အိမ် မှာ အစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်။ ရပ်ရွာမှာက ရပ်မိရပ်ဖလို့ သိမ်းကျုံးမခေါ်ဘူး။ အသက် ကြီးပိုင်းယောက်ျားများအဖွဲ့၊ အသက်ကြီးပိုင်း မိန်းမများအဖွဲ့၊ အပျို လူပျိုအဖွဲ့ဆိုပြီး စာရင်း နဲ့ ကောက်ယူဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ယောက်ျား ကြီးအဖွဲ့ကို ရှမ်းလို ‘ပေါ်ခိန်'(ခကွေးပါ)။ မိန်းမ ကြီးအဖွဲ့ကို ‘မယ်ခိန်'(ခကွေးပဲ)လို့ ခေါ်ပါ တယ်။ အပျို လူပျိုများကို ပေါင်းထားပြီး ခေါင်း ဆောင်ကို ‘လူပျိုခေါင်း’ ‘အပျိုခေါင်း’တဲ့။ အဲဒီလိုရပ်ရွာအဖွဲ့တွေဖိတ်ပြီး မိမိတို့ အလှူလုပ်မယ့်အကြောင်း တိုင်ပင်ကြေညာ ရတာပါ။ ဒါကို ‘ပွဲဟိန်း’တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ‘ဟိန်း’ဆိုတော့ အသံပေးလိုက်တာကို ပြော တာထင်ပါရဲ့။
အဲဒီပွဲဟိန်းတာက အလွန်အရေးကြီး တယ်။ ကိစ္စအဝဝအရပ်ကို ‘အပ်’ရတာပါ။ လူ ဘယ်လောက်ဖိတ်ချင်တယ်။ ရှင်ဘယ်နှပါး ပြုမယ်။ ကျောင်းဘယ်နှကျောင်းပင့်မယ်။ ဘာ ဟင်းကျွေးမယ်။ ဘာမုန့်ကျွေးမယ် စသဖြင့် တိုင်ပင်ရတယ်။ ဒီအခါ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပေါ်ခိန်ခေါင်း၊ မယ်ခိန်ခေါင်း(အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်)တွေက ဆန် ဘယ်နှတင်း၊ ဝက်သား ဘယ်နှပိဿာ စသဖြင့် စာရင်းခန့်မှန်းပေး တယ်။ ဒီနေရာမှာ စည်းကမ်းက ထမင်းကို ပေါ်ခိန်တွေက တာဝန်ယူချက်ရတယ်။ ထမင်း အိုးတွေက မိုးဗြဲဒယ်ကြီးတွေနဲ့ ချက်ရတာမို့ပါ။ အားရှိတဲ့ယောက်ျားတွေမှ ချီနိုင်မနိုင်တာကိုး။ အဲဒီလိုပဲ ဝက်သား(ရှမ်းဓလေ့မှာ ဝက်သား ကျွေးလေ့ရှိတယ်။) ဟင်းချက်ဖို့ကိုလည်း ပေါ် ခိန်တွေပဲ တာဝန်ယူရတယ်။ မိုးဗြဲဒယ်ကြီးတွေ နဲ့ ဝက်သားတုံးကြီးတွေကို နှပ်ရတာ မလွယ်ဘူး လေ။ အများအားဖြင့် မြို့လုံးကျွတ်ဖိတ်ရင် လူ ၁ဝဝဝ စာ။ ဆန် ၁ဝ တင်း၊ ဝက်သား ပိဿာ ၁ဝဝ ပါ။ ကျန်တဲ့ဟင်းချို(အလှူမှာ ချဉ်ရည်မချက်၊ ချဉ်ရည်က နာရေးကျမှချက်တာ) အဲဒီဟင်း ချိုအိုး အများအားဖြင့် မဲဇလီဟင်းချို၊ ကြိမ်ဖူး ဟင်းချိုအိုးကို မယ်ခိန်တွေက တာဝန်ယူရ တယ်။ အချဉ်အတွက် သရက်ချဉ်သုပ်၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ပဲတီချဉ်သုပ်တယ်။ ပုစွန်ခြောက် ကြော်(ပုလောကြော်)ကိုလည်း မယ်ခိန်တွေ တာဝန်ယူရတယ်။ ငါးဖယ်ဆုပ်ဟင်းပါရင် အဲဒါ မယ်ခိန့်တာဝန်။ အဲဒီလို အပြီးသတ်မှတ် ထားတယ်။
ပဲတီချဉ်အတွက် ပဲတီကို ဖျာတွေပေါ် မှာ တစ်ပတ်ကြိုပြီး အပင်ဖောက်ရပါတယ်။ လေးရက်လောက်ဆို အပင်လေးတွေရပြီ။ အဲဒါကို အချဉ်တည် သုံးရက်ဆို အနေတော်မို့ ပွဲရက်ကိုတွက်ပြီး ခုနစ်ရက် စောလုပ်ရတယ်။ ဒါက မယ်ခိန်ခေါင်းအလုပ်ပါ။ သူပဲ ကျွမ်း ကျင်တာလေ။ ပဲတီချဉ်က ငန်နေရင် ပျက်ရော။
အချိုပွဲအတွက် မုန့်တွေလုပ်ဖို့ အပျိုတွေ တာဝန်ယူရတယ်။ ဘာမုန့်လုပ်မှာလဲ။ ကျောက် ကျောလား၊ ဆနွင်းမကင်းလား၊ ငှက်ပျော ရွှေချီလား။ အလှူရှင်စိတ်ကြိုက် အပျိုအဖွဲ့ ကို အပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကရေကရာလိုမျိုး ကျ မယ်ခိန်တွေမှ လုပ်တတ်တာတဲ့။ မယ်ခိန် ကို အပ်ရပြန်ရော။ လက်ဖက်ပွဲက အသင့်ဝယ် လို့ရပါရဲ့။ လက်ဖက်ရည်အချိုကို နှပ်တတ် တာက လူပျိုခေါင်းပါ။ လူပျိုအဖွဲ့က လက် ဖက်ရည်တာဝန်ပေါ့။ ပစ္စည်းအားလုံး လူပျိုခေါင်းက ထိန်းသိမ်း သော့ခတ်တယ်။ သွားနှိုက်စားလို့မရ။ ဒဏ် ပေးခံရတယ်။ ဆေးလိပ်ကိုလည်း ပြောင်းဖူး ဖက်ကြီးတွေနဲ့၊ သနပ်ဖက်တွေနဲ့၊ ဆေးရိုးတို့ ကို ဆန်ကောထဲထည့်ပြီး တည်ခင်းတာပါ။ ဒီဟာကို ကျွမ်းကျင်သူများက မယ်ခိန်များပါ ပဲ။ ကွမ်းအစ်ကိုလည်း မယ်ခိန်က ကိုင်တယ်။ ကွမ်းသီးစိပ်နည်းနည်း ဝါးချင်ရင် မယ်ခိန် ခေါင်းကို မျက်နှာချိုသွေးပြီး တောင်းစားကြ ရတယ်။
ချက်စရာ ဒယ်အိုး၊ ယောက်မ၊ ရေစည် အားလုံးကို ပေါ်ခိန်အဖွဲ့က ရန်ပုံငွေနဲ့ ထူ ထောင်ထားလို့ ပြည့်စုံတယ်။ အဲသလိုပဲ။ ရေ တကောင်း၊ ရေခွက်၊ လက်ဖက်ရည်အချိုပန်း ကန်၊ အခါးပန်းကန်၊ ထမင်းစားပန်းကန်၊ ဟင်း ပန်းကန်၊ ဇွန်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း အပျို လူပျို အဖွဲ့က ရန်ပုံငွေနဲ့ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထား တယ်။ ဗီရိုတွေကို လူပျိုခေါင်းအိမ်မှာ သော့ ခတ်ထားတာပါ။ ဒါတွေ စီမံပြီးတဲ့အခါ သုံးရက်လောက် အလိုဆိုရင် ဖိတ်စာကမ်းရပါမယ်။ ဖိတ်စာ ဖိတ်ဖို့ တာဝန်က အပျိုအဖွဲ့ပါ။ လှလှပပ ဝတ်စား၊ ပုသိမ်ထီးဆောင်း၊ ငွေဖလားတွေ ပိုက်လို့ အပျိုလေးတွေ၊ အပျိုကြီးတွေ၊ ရပ်ကွက် အလိုက်..အိမ်စေ့၊ အိမ်ပူး၊ အိမ်ကပ်ခေါ်တဲ့ အိမ်ထောင်ခွဲတွေကိုပါ ဖိတ်ရပါတယ်။ ဖိတ်စာ ကမ်းတဲ့အပျိုတွေကိုကြည့်ပြီး လူပျိုတွေက ဝိုင်း စကြ၊ နောက်ကြပေါ့။ အရေးကြီးတဲ့အချက် တစ်ခုက ဖိတ်စာကို လမ်းလျှောက်ပြီး အိမ်စေ့ သွားရလို့ မောမှာမို့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးပေးရ ခြင်းပါ။ ခေါက်ဆွဲဆိုင်ထိုင်လည်း ရတယ်။ အဲဒီမှာ ထုံးစံက အပျိုတစ်ယောက် ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ပေးရတာပါ။ အလှူမှာလိုအပ်တဲ့ ထင်း၊ ကြိမ်ဖူး၊ မဲဇလီ ရွက်၊ ငှက်ပျောရွက်၊ ရေစည် စတာတွေကို တော့ လူပျိုတွေက တာဝန်ယူရတယ်။ တော ထဲသွား ထင်းခုတ်၊ ကြိမ်ဖူးခူး၊ မဲဇလီခူး သူတို့ လည်း ပျော်လို့။ လက်ဖက်ရည်ဖိုးလည်းရပေါ့။ (အရက်လုံးဝခွင့်မပြု၊ လူပျိုခေါင်းအမိန့်)
နောက်တစ်ခါ ရှင်လောင်းတွေကိစ္စ။ ဒါကိုလည်း အလှူရှင်ပူစရာမရှိဘူး။ မောင်ရင်လောင်း အဝတ်အစား၊ မကိုဋ်၊ လည်ဆွဲတန်ဆာ၊ ငွေဖလား စတာတွေကို အပျို ခေါင်းကပဲ တာဝန်ယူပြီး တိုင်းထွာငှားရမ်း ပေးပါတယ်။ အဝတ်အစားဆိုလည်း ကလေး နဲ့ အစမ်းဝတ်ကြည့်။ ပြင်စရာရှိပြင်ပေါ့။ မျက်နှာ အလှပြင်ဖို့ကအစ တာဝန်ယူကြတယ်။ အလှူရက်မတိုင်ခင် အကြိုနေ့(ပွဲဝင်တဲ့ နေ့)မှာ ရှင်လောင်းလှည့်တာပါပဲ။ ဘယ်လောက် ဆင်းရဲပါစေ ရှင်လောင်းမလှည့်ဘဲ မနေဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက ပကာသနမဟုတ်၊ ယုံကြည်မှုအရ ‘နတ်ပြ’တာမို့ပါ။ ရပ်ရွာထဲက ‘အရှင်ကြီး’လို့ခေါ်တဲ့ နတ်စင်ကို ရှင်လောင်း သွားပြရတယ်။ စောင့်ရှောက်ပါပေါ့။ (ဘုရား လောင်း တောထွက်တုန်းက မာန်နတ်တား သလိုမဖြစ်ဖို့…) အဲလိုမလုပ်ခဲ့ရင် သင်္ကန်း စည်းခါနီး မူးတာမော်တာဖြစ်တတ်သတဲ့။
အလှူလှည့်ရက်ကတော့ ရွာမှာ အဆူ ဆုံးပေါ့။ ရှိသမျှ အပျိုလူပျိုပေါက်စမကျန် ထွက်လိုက်ကြတာပါ။ ရှိတဲ့အဝတ်အစားလေး တွေ ထုတ်ဝတ်။ တတ်နိုင်သူတွေက အသစ် ချုပ်။ ဒိုးဝိုင်းကလည်း ညံနေရော။ ရှိုးလိုက်ရ တုနဲ့ပေါ့။ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလို ဆင်နဲ့ လှည့်တယ်။ မြင်းနဲ့လှည့်တယ်။ ဂျစ်ကားနဲ့လှည့် တယ်။ ဒီနေရာမှာ မောင်ရင်လောင်းရဲ့ ဖခင် က သပိတ်နဲ့ ယပ်ကိုထမ်း၊ မိခင်က သင်္ကန်း အုပ်ရွက်ရတာ။ ဖခင်မရှိတော့တဲ့လူ၊ မိခင်မရှိ တော့တဲ့လူတွေ..ငိုကြရတယ်။ မိဘမစုံတဲ့ မောင်ရင်လောင်းလေးတွေ စိတ်အားငယ်ကြ ရတယ်။ ဇာတ်ပွဲ၊ အငြိမ့်ပွဲ၊ ဝါသနာပါရင် တတ် လည်းတတ်နိုင်ရင် အဲဒီညပွဲကပါတယ်။ ညလုံး ပေါက်မို့ အိပ်ရေးတွေပျက်၊ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း ပွဲကြည့်ကြ၊ ပျော်ကြတာပါပဲ။ ဒီလိုညပွဲ မပါ ရင်တောင် မနက်ပိုင်း မောင်ရင်လောင်းဘိသိက် ခံပွဲတော့ လုပ်ရတယ်။ ဆိုင်းဝိုင်းနဲ့၊ ဘိသိက် ဆရာနဲ့။ ဒီမှာလည်း မောင်ရင်လောင်းလေး တွေက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘဆရာကို ကန်တော့ခန်းပါတော့ မိဘမရှိတဲ့ဘဝပိုင်ရှင် တွေ..ငိုမဆုံးပေါ့။ ဘိသိက်ဆရာ အပြော ကောင်းကောင်း၊ ဆိုင်းကလည်း ကောင်းကောင်း ဆိုရင် ပီတိဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီလိုဘိသိက်မြှောက်ပြီးရင် မင်းသား လိုဝတ်ထားတဲ့ မောင်ရင်လောင်းတွေ ဟိုနား ဒီနား အပေါ့အပါးသွားရင်တောင် လူငယ်တွေ လူပျိုတွေခြံရံပြီး ရွှေထီးမိုးပြီးမှ သွားရတယ်။ (ဒါက ဘုရားသားတော်ရာဟုလာလေးကို ပုံစံ ယူတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်) အဲဒီနောက်..လာသမျှပရိသတ်ကို ထမင်းကျွေးမယ်၊ လူများရင် ထမင်းရုံသပ်သပ်ဆောက်ရတယ်။ မတိုးမဝှေ့ ဖို့ ”မြို့ကုန်းရွာက ထမင်းစားဖို့ ကြွကြပါခင်ဗျား” ဆိုတာမျိုး အော်ပြီး အသုတ်ခွဲကျွေးရတယ်။ ဘိသိက်သွန်းတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဲ အငြိမ့်ဆက်က ပြီး ဧည့်ခံနိုင်သေးတယ်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီဆိုရင် ကျွေးမွေး ကိစ္စပြီးပြီ။ ပင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေက ဆရာ တော်တွေ စုံပြီ။ ဒီအခါ သင်္ကန်းစည်းပေးကြ တယ်။ အဲ…မစည်းခင် ‘ဆံချ’တာ၊ အဖေ အမေက ဆံခံပဝါကိုင်ရတာမို့၊ မိဘမစုံရင် ငိုရပြန်။ အဲဒါပြီးတော့ သင်္ကန်းတောင်း၊ သင်္ကန်း ဝတ်၊ တစ်ခါတည်း တရားဟော၊ တရားနာ၊ ရေစက်ချပြီး ဗြောတီးတော့တာပါပဲ။
အလှူမှာ ပါဝင်လုပ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့တွေက ဒီအတိုင်း မပြီးဘူး။ ညရောက်တာ နဲ့ အလှူရှင်အိမ်ကို ချီတက်ကြတာ။ ပေါ်ခိန် တွေက ဟင်းမွှေတဲ့ယောက်မကြီးတွေထမ်းလို့ မယ်ခိန်တွေက ဆန်ကောဆန်ခါတွေဆောင်း လို့ အပျိုလူပျိုတွေကလည်း ဝါးကျည်တောက် တွေနဲ့။ (ဒါက..သီချင်းဆိုရင် ကြမ်းပြင်ထု ဖို့) ဒိုးပတ်ဝိုင်းလည်း ပါတယ်။ အလှူရှင်က ဝမ်းပန်းတသာ ထွက်ကြို တယ်။ ကကြတယ်။ ဝါသနာပါတဲ့လူအကုန် ဝင်ကတယ်။ ပျော်ကြတာလေ။ အဲဒီမှာ ကူညီ ခဲ့သူတွေက ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှပေးဆိုပြီး အလှူခံ တော့တာပဲ။ အမှန်က’ဆုခံ’တာပါ။ ‘မီးဆုခံ’လို့ ခေါ်ကြတယ်။ လုပ်အားပေးခဲ့လို့ ဆုချတာ။ ကုသိုလ်ပြန်ယူတာ။ ကဲ..ကျွန်မတို့ရှမ်းနီတွေရဲ့ ရှမ်းရှင်ပြု က အားလုံးပါဝင်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲအဖြစ် ပျော်စရာ မကောင်းပါလား။ ရွာသို့..လွမ်းလျက်။
ကြေးနီ စီမံကိန်းကြောင့် လက်ပံတောင်းဒေသခံများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တ
နိုင်ငံခြား ဘဏ်များကို ချေးငွေထုတ်ချေးခွင့်ပြုခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အခကြေးငွေ လျှော့ချ?
‘ ပရိသတ်ဆီက တုံ့ ပြန်မှုကတော့ ကောင်းတာပဲ ပိုများတယ်။ ချီးကျူးစကားသံတွေ ကြားရတော့ ဝမ်းသာရတယ်’
ငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာအတွက် အမျိုးသမီးများတန်းတူညီမျှရဖို့ အရေးကြီးဟု ဂျိုလီပြော
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း ရှုံးထွက်ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ ရှမ်းယူနိုက်တက် အသင်းနှင့် ဧရ?
ကျောက်ကြီးမြို့၌ ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြု စီမံကိန်း၏ ပါဝင် ပတ်သက်နေသူများ တွေ့ဆုံဆွေး??